Akụkọ - Banyere mmiri ara ehi
Ugbu a nke ngwaahịa mmiri ara ehi na China
Site na mmụba na-aga n'ihu nke ụkpụrụ obibi ndụ ndị mmadụ, ndị na-azụ ụlọ na-achọ ngwaahịa mmiri ara ehi na-adịwanye mma. Dairylọ ọrụ mmiri ara ehi bụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe oriri. Kemgbe mgbanwe na mmeghe, ụlọ ọrụ mmiri ara ehi nke China agbanweela mgbanwe dị mkpa maka ogo ụlọ ọrụ, mmepụta ngwaahịa mmiri ara ehi, akụrụngwa akụrụngwa, ogo na nchekwa. Otú ọ dị, n'ihi oge mmepe dị mkpirikpi, ngwa ngwa mmepe ngwa ngwa na ntọala na-adịghị ike nke ụlọ ọrụ mmiri ara ehi, ọkachasị n'ihi njikwa mmiri ara ehi azụ, njikwa njikwa na ụzọ nchọpụta, wdg. Nsogbu na nchekwa na-eme site n'oge ruo n'oge, nke na-eweta mmebi ndụ na nchekwa nke ndị ahịa. Ya mere, mmelite nke nchọpụta mmiri ara ehi nke ngwaahịa mmiri bụ nsogbu ekwesịrị ị bea ntị na ọha mmadụ taa.
Ka ọ dị ugbu a, a na-ekepụta ngwaahịa mmiri ara ehi ụlọ dị ka ndị a:
Mmiri ara gbara ogwu: mmiri ara ehi esichara, mmiri ara ehi edoziri edozi na mmiri ara ehi ndị ọzọ (dị ka membrane filtration sterilization na-enweghị ọgwụgwọ okpomọkụ, ultra-high pressure sterilization, wdg);
Ihe oriri na-enye mmiri ara ehi: mmiri ara ehi (yoghurt), mmiri ara ehi na-esi ísì ụtọ (yoghurt ekpomeekpo), wdg;
Mmiri ara ehi ntụ ntụ: mmiri ara ehi ntụ ara ehi, mmiri ara ehi na-ekpochapu mmiri ara ehi, nke nwere mmiri ara ehi na-atọ ụtọ, nke nwere mmiri ara ehi, mmiri ara ehi a gbanyere agwa (abụba zuru ezu, nke a na-akọchaghị), ntụ ntụ ntụ, mmiri ara ehi ntụ ntụ, ihe oriri na-edozi ahụ e wusiri ike na mmiri ara ehi na mmiri ara ehi ndị ọzọ, wdg. ;
Ude, mmiri ara ehi mmanya, mmiri ara ehi tii, chiiz; debara mmiri ara ehi; whey ntụ ntụ, wdg;
Mmiri ara ehi na-enye nwa ara ehi mmiri ara ehi ntụ ntụ: mmiri ara ehi dabeere na mmiri ara ehi usoro mmiri ara ehi ntụ ntụ, mmiri ara ehi dabeere usoro maka okenye ụmụ ọhụrụ na ụmụntakịrị;
JUMP igwe (SHANGHAI) LIMITED inye mmiri ara ehi nhazi, yogọt fermentation tank, pasteurized mmiri ara ehi ndochi igwe, mmiri ara ehi nwoke ịga ụlọ igwe, ndochi na nkwakọ igwe, njem akụrụngwa, ọmụmụ mmiri (valvụ, ọkpọkọ oyiyi akwa, nfuli), mmepụta mmiri na nsị ọgwụgwọ akụrụngwa, inkjet ngwa nbipute, koodu nbipute, ule ngwá, ngwaahịa traceability usoro;
Igwe ihe ọ drinkụ drinkụ ihe ọ Iceụ Iceụ Ice cream
Ahịa ude mmiri, ihe ọ Iceụ drinkụ mmiri oyi, ice cream coagulator, igwe ihe nracha, igwe popsicle, igwe ihe ọ coldụ coldụ oyi, usoro zuru oke nke ihe eji agba mmiri, igwe nkpuchi akụrụngwa, igwe mkpụkọ akụrụngwa, igwe na-ejuputa igwe, igwe ude na-ejuputa igwe , margarine, mkpụmkpụ igwe ngwa-oyi kpọnwụrụ, wdg.
Post oge: Sep-24-2020